सरकारले ७ वटै प्रदेशमा वर्षैभरी सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने !
सरकारले सातवटै प्रदेशमा वर्षैभरी सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भएको छ। उपभोक्तालाई सुपथ मूल्यमा दैनिक उपभोग्य वस्तु उपलव्ध गराउन सहुलियत पसल सञ्चालन गर्न लागिएको जनाईएको छ । यो खबर आजको कारोबार दैनिकमा लक्ष्मी सापकोटाले लेखेका छन्। यसअघि चाडपर्वको बेलामा मात्रै सञ्चालन हुँदै आएको सहुलियत पसल आगामी वर्षदेखि बर्षैभरी संचालन हुनेछ । यो सुबिधा सातै प्रदेशमा वर्षैभरी सञ्चालन गर्न लागिएको आपुर्ती व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समितिले जानकारी दिएको छ । यस्ता सहुलियत पसल सात प्रदेशमा १४ वटा सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गर्न लागिएको आपुर्ती व्यवस्था विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।
नयाँ पुस्ता कता जाँदै छ ? (यो पनि पढ्नुहोस !)
समान वातावरणमा छोरा र छोरीलाई हुर्काउनु, पढाउनु, बढाउनुपर्छ भनेर लामो समयदेखि वकालत गरियो । विभेदपूर्ण हुर्काइका कारण महिलाहरू पछि परेको अनुभव साक्षी भएकाले यो अभियानले घरघरमा पूर्णता पाउँदै छ । तर, परिणामचाहिँ सोचेभन्दा अलि फरक देखिइरहेको छ । छोरीलाई छोराजस्तै गरी हुर्काउन खोज्दा हाम्रा छोरीहरूले कलेज पुग्दासम्म एक कप चिया बनाएर खान सकिरहेको देखिँदैन । जतिबेला हामी आफ्नो परिवारलाई खाना बनाएर खुवाउने मात्र होइन, अरू थुप्रै दायित्वहरू काँधमा लिएर हिँड्थ्यौँ त्यो उमेरमा उनीहरू पढाइमा बाहेक अरू कुरामा वास्तै नगर्ने भएका छन् ।
अध्ययनमा पनि सबैको रुचि छ भन्न मिल्ने अवस्था छैन । आफ्नो लागि नभएर बाबुआमाको लागि पढिदिएजस्तो गरी ‘मैले पढिदिएकै छ नि’को शैलीमा कलेज–घर गरेको देखिन्छ । यो हाम्रो समाजमा हुर्कंदै गरेका सन्तानहरूको वास्तविकता हो । समान व्यवहार गरेर बनाउन खोजेकोचाहिँ छोरीसँगै छोरालाई पनि घर–व्यवहारमा निपुण र छोरीलाई पनि बाहिरको काममा समान रुचिको अवस्था थियो । विगत विभेदपूर्ण भयो भनेर फरक गर्न खोजेको हाम्रो हुर्काइमा खै के मिलेन, न छोराजस्तो, न छोरीजस्तो, न घरव्यवहार र भान्सामा रुचि न त बाहिर नै धेरै चासो…सोचेभन्दा भिन्दै तरिकाले नयाँ पुस्ता हुर्कंदै छ ।